Maraykanka oo Hambalyo ku aadan maalinta xornimada iyo israaca u soo diray Shacabka Soomaaliyeed. – Balcad.com Teyteyleey
Maraykanka oo Hambalyo ku aadan maalinta xornimada iyo israaca u soo diray Shacabka Soomaaliyeed.
By Maxamed Axmed Xasan	 On Jul 1, 2017
Stephen Schwartz Safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku sheegay isaga oo ku hadlaya magaca Dowladda Maraykanka inuu hambalyo u dirayo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku sugan yihiin.
“Markii aan imid Soomaaliya ee aan noqday safiirkii u horeeyey muddo 25 sano ah, waxaan marqaati u noqdey guulaha la yaabka leh ee dadka Soomaaliyeed sameeyeen ee dib u dhiska dalkooda,Inkasta oo ay barbar socotey qatar badan sida Macaluul, weeraro ka imaanaya Al-Shabaab, Dakhliga dowladda oo yar, Caddaaladda oo aan tabar weyn lahayn iyo kuwo kale” ayuu yiri Denjire Stephen Schwartz.
Dowladda Maraykanka ayaa la sheegay inay aaminsan tahay Madaxweyne Farmaajo iyo RW Xasan Cali Kheyre, islamarkaana ay dhab ka tahay inay dalka ku soo celiyaan nabad iyo dib u heshishiisiin, dadka Soomaaliyeedna dib ugu soo laabtaan shaqooyinkoodi.
“Anaga oo Maraykanka ah iyo qaar kale oo ka mid ah Beesha Caalamku waxaan si dhaw ula shaqeyneynaa Dowladda Federaalka ah iyo maamulada gobolada ka jira, si isbeddel degdeg ah loogu sameeyo bulshada Soomaaliyeed” ayuu yiri Stephen Schwartz .
War saxaafadeedka Safiirka Maraykanku soo sarey ayaa lagu sheegay in siyaasiyiinta Soomaalida laga doonaayo inay dhinac iska dhigaan khilkaafka keenaya khatar siyaasadeed diiradana ay saaraan horusocod dhab ah iyada oo muhimadda la siinaayo, jebinta argagixisada, kordhinta dakhliga iyo wadaaga kheyraadka dowladaha xubnaha ka ah federaalka, dib u eegista iyo dhamaytirka dastuurka, diyaar garowga doorasho hal qof hal cod ah, wadahadal dhab ah oo lala galo Somaliland, xoojinta dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo la dagaalnak Musuqa.
Dhanka kale safiirka wuxuu sheegay in shaqooyinka badan ee horyaala Dowladda Soomaaliya ee aan waxba laga qaban 30-kii sano ee u dambeeyey , aysan suurta gal ahayn in sanad wax looga qabto ama afar sano laakiin la iska doonayo in asaaskii guusha la asteeyo ka hor 2021-ka.
The post Maraykanka oo Hambalyo ku aadan maalinta xornimada iyo israaca u soo diray Shacabka Soomaaliyeed. appeared first on Ilwareed Online.
Dowladda Soomaaliya oo Abuu Mansuur la bilowday Wada-hadal Toos ah.
Munaasabad aan caadi aheyn oo lagu xusayay 1-da Luulyo oo xalay Muqdisho lagu qabtay